मणिकुमार सुब्बाको लागि म माफ माग्दिन: निशिकान्त दुबे - खबरम्यागजिन
Homeखबरमणिकुमार सुब्बाको लागि म माफ माग्दिन: निशिकान्त दुबे
December 14, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि खबर 0
‘म मेरो वयानमा सयप्रतिशत कायम छु। यति गर्दा पनि गोर्खाहरू मसित रिसाउँछन् भने म माफी मागिदिन्छु,’ दुबेले भनेका छन्, ‘मैले सुब्बा साहबबारे केही बोलेको छैन। मैले काङ्ग्रेसकोबारे बोलेको छु। मैले गोर्खाहरूको भावना आहत गरेको छु भने त्यो मलाई थाहा छैन। म त गोर्खा समाजको लागि खुन दिन पनि तयार छु। गोर्खाको लागि लाखपल्ट माफी माग्न तयार छु। तर मणिकुमार सुब्बाको लागि म माफ माग्दिन।’
कालेबुङ, 14 दिसम्बर
झारखण्डका भाजपा सांसद निशिकान्त दुबेले मणिकुमार सुब्बाको लागि गोर्खासमाजसित माफी नमाग्ने र आफू आफ्नो वयानमा कायम रहेको जनाएका छन्। बीरगोर्खा वेब च्यानलसित बोल्दै दुबेले आफूले काङ्ग्रेसलाई प्रहार गरेको तर गोर्खा समाजलाई प्रहार नगरेको भन्दै आफ्नो वयानमा आफू सय प्रतिशत कायम रहेको जनाएका छन्।
‘मैले के भनेर र, मैले त ‘सुब्बा नेपालका नागरिक थिए त्यसैले काङ्ग्रेसले उनीमाथि सीबीआई लगायो’ भनेको छु। किन भने सीबीआईले मणिकुमार सुब्बालाई नेपालको सिटिजन मानेको थियो, जुन कारणले उनलाई काङ्ग्रेसले पार्टीबाट निकाल्यो,’ दुबेले भनेका छन्, ‘मैले त काङ्ग्रेसलाई प्रहार गरेको थिएँ। मैले बङ्गलादेशी घुसपैठिया भनेको छु नेपाली घुसपैठिया भनेको छैन।’
दुबेअनुसार मणिकुमार सुब्बालाई 2008 मा काङ्ग्रेसले नेपालको नागरिक भनेर नै पार्टीबाट निकालेको थियो। त्यही भएर नै उनीमाथि सीबीआईले चार्जसिट निकाल्यो। सीबीआई कङ्ग्रेसले नै लगाएको हो। त्यही भएर नै काङ्ग्रेसले सुब्बालाई 2014 मा टिकट पनि दिएन।
दार्जीलिङका सांसद राजु विष्टले भने हिजो अर्कै वयान दिएका थिए। दुबेले पूर्व सांसद स्व. मणिकुमार सुब्बालाई नेपालको नागरिक भनेको र सुब्बाले असममा घुसपैठ गराएको भनेकोमा विष्टले माफी मागेका थिए। विष्टले त दुबेले पूर्व सांसद मणिकुमार सुब्बामाथि लगाएको सम्पूर्ण आरोपको खण्डन गर्दै उनको परिवारप्रति माफी नै मागेका थिए।
‘निसिकान्त दुबेले दिएको गलत वक्तव्यको म जोडदार खण्डन गर्दछु अनि स्व. मणिकुमार सुब्बाको परिवारप्रति क्षमा चाहन्छु,’ विष्टले भनेका थिए, ‘जब सीबीआईले उनी नेपालका नागरिक हुन् भने मुद्दा दर्ता गरे अनि त्यस मुद्दालाई समेत न्यायलयमा प्रमाणित गर्न सकेनन्। यसकारण दुबेले दिएको बयान केवल एउटा बयान बाहेक केही होइन। उनलाई संसदमा बोल्न अघि म सत्य तथ्य सङ्ग्रह गर्ने सुझाव दिन चाहन्छु।’
सांसद दुबेको ज्ञानको अभावकै कारण आफ्नो भावनामा समेत ठेस पुगेको र भारतभरि छरिएका सम्पूर्ण गोर्खाहरूसँगै आसमका जनताको भावनामा समेत ठेस पुगेको बताएका थिए। तर दुबेले आफूले गोर्खाहरूको बावनामा ठेस नपुऱ्याएको र आफू फ्नो वयानमा कायम रहेको मात्र जनाएका छैनन् सुब्बा र सुब्बाका परिवारप्रति क्षमा नै नमाग्ने घोषणा समेत गरेका छन्।
यता राजु विष्टले भने स्व. सुब्बाको पत्नीसँग टेलिफोनिक कुराकानी गरेर खेद प्रकट गरेको र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लासँग भेटेर दुबेले दिएको बयानलाई रेकर्डबाट हटाउने अनुरोध गरेको बताएका थिए। भाजपाका सांसद दुबेको बयानले भाजपाकै सांसद राजु विष्टकोसमेत भावनामा ठेस पुगेको विष्ट आफैले बताएका छन्। यता दुबे चाँही त्यस्तो ठेस पुऱ्याउने आफूले नबोलेको र उल्टै आफ्नो वयानमा कायम रहेको बताइरहेका छन्।
यता गोजमुमो, गोरामुमो, क्रामाकपालगायतले दुबेको वयानले गोर्खाहरूको भावनामा चोट पुगेको बताइरहेका छन्। यस मामिलामा भने विमल गुरुङले मौनता साँधेका छन्।
साहित्यमा प्रगतिवाद र जीवनमा मार्क्सवादलाई उतार्नु सबैभन्दा कठिन कार्य हो : एनबी घिमिरे